Ndị di na nwunye na-eme mkpa ọlụlụ na-akpata Desegregation na America »Sugarlove®
Organic Sugarlove® nke Mo Nso!
Menu na wijetị
Nchịkọta ndị na-anọghị n'ịntanetị mee
Mmasị onwe onye
Uche, Ahụ & Mkpụrụ Obi: 25 Nzọụkwụ Iji Itule
Bido Mkpụrụ Obi
Akaụntụ M ➤
Atụmatụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị!
Ntuziaka inyeaka shuga
Blog nke mmụọ nke mmụọ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke Asia> Onlinebọchị ọnlaịnụ> Ngwa ndị enyi enyị
Bọchị Eshia> Datebọchị Echiche >bọchị> Abalị Datebọchị Mụrụ
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke okenye> Mkpakọrịta nwoke na nwanyị Asia> saịtị Latina
Datebọchị ntorobịa> mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke afọ> Gbakọ iche Datebọchị
Mmemme Nwoke Di na Nwunye Ndinam Nsogbu na America
Mbad2020 on Njikọta Mịnịstrị WhatsApp Group / Ndi ana-akpo. Ndepụta Oku Nr.
Samuel on Njikọta Mịnịstrị WhatsApp Group / Ndi ana-akpo. Ndepụta Oku Nr.
Brayan on 100% Free Dating App / Site. Sugar Daddy, Mama & Baby
Sebastian Garcia on 100% Free Dating App / Site. Sugar Daddy, Mama & Baby
Næstvedgade 21, 5th
(+ 45) 29 80 13 19
Mind, Isi & Mkpụrụ Obi Atụmatụ
Mmemme Datingmụaka N’alụsọ na Ntaneti na ntanetị abụbeghị nke a na-anabata n’ọtụtụ obodo. Agbanyeghị, a maara ya ịbụ otu n'ime mgbanwe kachasị ukwuu na-elekọta mmadụ kemgbe ụwa. Ọtụtụ puku afọ gara aga, ndị mmadụ bidoro ibi na nnukwu obodo na ndị di na nwunye gbakọtara ọnụ n'ihi na ndị enyi na ezinụlọ jikọtara ha. Ugbu a ndị mmadụ na-amata ugbu a na echiche na anyị nweere onwe chọọ ndi di na nwunye na nke aka anyị, nke dabere n'ịhụnanya na enweghị enyemaka ọ bụla site n'aka nne na nna, ndị enyi na ndị ikwu.
Echiche nke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịchọ ịhụnanya anọwo naanị narị afọ ole na ole, ọ bụrụgodị, ọ na - ejedebe nnabata site n’aka ndị ezi na ụlọ na ndị enyi. Ha na-ewebata onye ha na ibe ha nwere ihunanya ha chere na ọ dị mma karịa onye ha hụrụ n'anya. Ọnọdụ a nwere ike ọ gaghị abụ alụghị di ma ọ bụ nwunye ma nsonaazụ ya yiri nnọọ. Enwere ọtụtụ ịchọpụta na nnabata iji hụ na onye ị lụrụ ga-abịa n'ọdịnihu bụ nke otu agbụrụ, agbụrụ, agbụrụ na okpukperechi ha.
Di na Nwunye Ntugharị Ntugharị Ejiri Ntaneti
Ijikọ site na ịntanetị abụrụla ihe ụzọ kachasị ịmalite mmekọrịta ịhụnanya na US. Otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ na ndị lụrụ di na nwunye malitere site na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ndị bịara abịa zuru oke, ndị zụlitere n'ụzọ dị iche, ga-ebido ebikọ ọnụ na-enweghị ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ jikọtara ọnụ.
Ka ọtụtụ ndị bịara abịa na-akpakọrịta, ụdị ndị na-ewulite ezinụlọ na-agbanwekwa, nke a na-agbanwekwa ụzọ ndụ ọzọ. Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị na-emebi mmekọrịta mmadụ na America ma na-ewu ezinụlọ nwere oke mmekọrịta ọha na eze. Ụbọchị ugbu a ndị di na nwunye mbụ zutere na ntanetị nwee ohere dị elu nke ịbụ ndị agbụrụ ọzọ ma ọ bụ sitere na agbụrụ dị iche iche kpamkpam. Nke a bụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-ezute offline (30% vs 23%)
Ndị na-alụbeghị di na nwunye ịkpa na ntanetị nwere ezigbo ohere ịnwe nzụlite okpukpe dị iche iche
E jiri ya atụnyere ndị di na nwunye na-anọghị n'ịntanetị, ọ bụ 51% vs 38%, ma n'ịzụlite ha na ihe ha na-eme dịka okenye. O yikarịrị ka onye gụsịrị akwụkwọ na mahadum ga-ejikọ ya na onye na-abụghị gụsịrị akwụkwọ (30% vs 22%), na-egbochi nnukwu oghere na agụmakwụkwọ na mmekọrịta mmadụ na America.
Di na nwunye oji di ocha bu ndi n’enwe nsogbu iwe megide ndi di iche iche na America, ma ha na onye ha na ha na-akpa n’ online onlinekari, nke a yiri ka o na-emewanye oge. E jiri ya tụnyere mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-anọghị n'ịntanetị, ọ bụ 8% vs 3%. Nlele ejirila bụ nke ụmụ amaala okenye America dị n’agbata afọ 2009 na 2017. Ndị ọrụ ntanetị na ndị na-anọghị n'ịntanetị nyochachara nyocha ahụ maka inwekwu arụmọrụ na nnọchite nha anya.
Agbanyeghị, amachaghị ma mmetụta ndị a na-agbanwe na mgbanwe nke mkpakọrịta ntanetị ịntanetị mana dịka ka ndị mmadụ na-aga n’ihu ịchọta ịhụnanya na ntanetị, mmetụta dị elu na mmụba nke ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị America. Ọnụ ọgụgụ na-abawanye ụba nke di na nwunye na-agbanwe demograph nke obodo, òtù okpukpe, ụlọ akwụkwọ, ebe ọrụ na ihe ndị ọzọ.
Diversitykpa iche ịkpa na ntanetị nwere ike ịnwe ike ijikọ ndị otu eji eme obodo iji kọwaa ha.
Ha na-eme ohere iji na-ekerịta ozi, na-ewebata ibe ha ma na-akwado ibe ha n'ofe obodo na ezinụlọ dị iche iche. Netiwọki ndị a dịgasị iche iche nke ndị enyi na ezinụlọ na-ekepụta nnukwu ndị eleda anya nke desegregation.
Ndinyene nsan̄a ke Intanet ikenyeneke ndibuana. Ọ ga-abụrịrị usoro njikọ aka ọfụma nke ezin’ụlọ maka ndị ezinaụlọ ha ga -achọ ibe ha. Nke a ka nwere ike ime n'ọdịnihu dị nso dịka ọ na-eme site na netwọkụ mmekọrịta mana enwere ike inwe ndị di na nwunye na-agaghị enwe ọfụma karịa ndị di na nwunye ihunanya.
Ndị mmadụ anwalela mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị iji chọta ndị mmekọ ụdị nzụlite ha. .Fọdụ ọmụmụ banyere omume mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị gosi na ụdị ndị ahụ bụ o yikarịrị ka ị ga-aza nye ndị mmekọ ma ọ bụrụ na ha si otu agbụrụ, agbụrụ, okpukpe na nzụlite. Na-anọghị n'ịntanetị, ha na-enwe obi ilu mgbe ha na-ahọrọ onye ha ga-emekọrịta ihe. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ọdọ mmiri dị n'ịntanetị na-ewu ewu karịa nke na-anọghị n'ịntanetị, ihe niile ọ na-ewe iji mepụta ndị di na nwunye dị iche iche bụ obere uche nwere oghe.
A ka nwere ike iji onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya na-achọ ihe karịrị otu ụzọ.
Nke a nwere ike sie ike na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-anọghị n'ịntanetị n'ihi na ị nwere ike ịsachapụ nhọrọ gị ka ịchọta egwuregwu dichara. Omume Picky dị obere adịkarịghị na ntanetị mana enweghị ihe kpatara ị ga-eji kwenye na ọ gaghị abụ ihe nkịtị. Ọ bụrụ na ọ bụ ya mere, yabụ ịkpa ike na ntanetị nwere ike ibute nkewa karịa ihe ọ bụla ọzọ gbasara ịhụnanya.
Isoro onye ntanetị agbanwebeghị ọtụtụ ihe anyị kwenyere na ọ mere. Ndị di na nwunye na-enwewanye mmekọ na ịbawanye ụba site na ịntanetị. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ dị nwoke na nwanyị nwere mmekọ nwoke na nwanyị na-abawanye ụba. Kemgbe etiti afọ 1990, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị lụrụ di na nwunye ma ọ bụ ndị na-ebikọ ọnụ na 30 na 40s (72-73%) na ụmụ nwanyị nọ n'agbata afọ 30 na iri anọ na anọ na di ma ọ bụ enyi nwoke (44-80%) , ọnụego ya anọgidesiri ike.
Ọnụ ọgụgụ ndị nwoke na ndị nwanyị inwe mmekọrịta nwoke na nwanyị na-abawanye ụba kemgbe 1990s. Ọ bụ ihe siri ike ịkọ ma ọ bụ nsonaazụ nke ịntanetị ma ọ bụ mgbanwe dị omimi iwu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya merela n'oge a.
N’agbanyeghi ihe omumu, enwechaghi ihe akaebe iji gosi ndi mmadu zutere n’igwe nwere obi uto mmekọrịta ma ọ bụ alụmdi na nwunye.
Ndị mmadụ na-enwekarị mmasị na-adọta ndị nwere echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị yiri ya. 54% nke ndị di na nwunye ka amara dị ka ndị otu. Nke a metụtara ndị di na nwunye na ntanetị na ndị na-anọghị n'ịntanetị ma enwere ike ịgbanwe n'ọdịniihu.
N'oge na-adịghị anya, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị ga-aza ọtụtụ ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ America, alụmdi na nwunye na ndị nne na nna. N'agbanyeghị nke a, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ewepụla nyocha nke ọma site n'aka ọha na eze, ọnọdụ yiri nke ụlọ ọrụ tech ndị ọzọ enwetela. Agbanyeghị, mkparịta ụka na-aga n'ihu na algọridim ndị dakọtara na saịtị ndị a nke nwere ike ime ka ịhapụ imekọ ihe ọnụ.
A na-atụ anya na a ga-enwekwu mkparịta ụka gbasara etu mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ntanetị na ngwanrọ si arụ ọrụ, etu esi ahazi ndị ọrụ na nhazi algọridim ha na ntanetị, ihe data echekwara yana ndị erere ndị ọzọ. Enwere ike ụfọdụ ụjọ banyere ụdị mkpakọrịta nwoke na nwanyị a, ọkachasị ndị nwere ike itufu mgbe ụmụ ha na-alụ karịa ndị obodo ha. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị enwere ike ịnabata ya mana ọ ga na-ese okwu na ndọrọ ndọrọ ka oge na-aga.
Ihe na January 27, 2020 January 27, 2020 Author AdminCategories Isi PopsTags 100 Percent Free Chat Rooms Maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, 100% Weebụ Ntanetị Weebụ Ntaneti na ngwa ọdịnala, Di na Nwunye Nwoke Mmemme Ntanetị & saịtị
Echiche 3 na "Di na Nwunye Nwoke na Nwanyị Mmekpa Ihe Na-akpata Nsogbu na America"
Yashavantha ekwu, sị:
February 18, 2020 na 5: 06 am
Ndụmọdụ ị na-eji achọ ịlụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị nyeere m aka nke ukwuu na ndụ m
SUBIYEH ekwu, sị:
March 22, 2020 na 3: 22 pm
Kenzy Turner ekwu, sị:
March 26, 2020 na 6: 17 am
Ana m eche mgbe niile ịntanetị ngwa ọdịnala bụ ụzọ kachasị mma iji zute ndị na-alụbeghị di. Daalụ maka ịkekọrịta!
Debanye na akwụkwọ akụkọ anyị
Previous Previous post: Etu esi acho a sugar papa, Momma & Babe On Tinder App
Osote Next post: Datebọchị ntorobịa> mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke afọ> Gbakọ iche Datebọchị
Nbanye ma ọ bụ debanye aha
amụma nzuzo Nganga kwadoro site na WordPress